IAMAZON IPHEHLELELE ENYE INGQOKELELA YEFANITSHALA EFIKELELEKAYO KWIREGISTRY YAKHO - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato IAmazon Iphehlelele Enye Ingqokelela yefanitshala efikelelekayo egqibeleleyo kwiRegistry yakho
IAmazon Iphehlelele Enye Ingqokelela yefanitshala efikelelekayo egqibeleleyo kwiRegistry yakho
Ngu: Esther Lee 10/31/2018 ngo-5: 30 PM
Misa yonke into kwaye ubhalise. IAmazon ineqoqo elitsha lokubonelela ngekhaya elinenxalenye elinganayo efikelelekayo nelilungele ukubhaliswa komtshato wakho. NgoLwesithathu, Okthobha 31, umthengisi wabhengeza ityala lakhe ye Ikhaya laseRavenna , umgca omtsha onika ifenitshala engapheliyo kwinqanaba lexabiso elifanelekileyo.
Ingqokelela ibandakanya yonke into kwindlwana yakho esandula kutshata kubandakanya iisofa, izitulo kunye neetafile zekofu kwindawo yegumbi lokuhlala. Kukwakho nezitulo zebar kunye neendaba zosasazo ngeenjongo zokuzonwabisa, ezijikelezwe zizinto eziyimfuneko kwigumbi lokulala njengokukhanyisa kunye neebhodi eziphambili.
Isitayile sichazwa njengesiqhelo kwi-silhouette yayo ngelixa imibala kunye neprints ziya kugcina kuphela izithuba ezikhoyo. Izihlalo zothando ziqala kwi- $ 499 kunye noluhlu ukuya kwii-849 zamaRandi yesofa yengalo esongelweyo eneengalo ezibandakanya imilenze yeplanga kunye neetafile eziguqukayo eziguqukayo. I-headboard yile ukhetho oluhlaza okwesibhakabhaka oko kuqala kwi- $ 189, kwaye isitendi esimhlophe esimhlophe sokuzonwabisa Oko kubandakanya amabala okugcina yi- $ 329.
Elona candelo lililo kukuba izibini ezicwangcisa imitshato yazo zinokongeza iimveliso kwiirejista zazo ukuze iindwendwe ezithandekayo zizalisekise ukongezwa kwekhaya endaweni yoko.
Kunye neRavenna Ikhaya, iAmazon kutsha nje ibhengeze ingqokelela yayo entsha kunye nomyili uJonathan Adler. Jonga umgca ongezantsi.
Qala irejista yakho yomtshatoApha.
Amaxabiso amaqebengwana ama-3 ikeyiki yomtshato
Umama unyana unyana iingoma zomtshato ilizwe 2015
nam ndiyakuthanda iikowuti
iinwele zomtshato ngeenwele ezibhityileyo
unxiba ntoni umakoti xa ugeza